Fihenam-bidy fanamboarana milina fanontam-pirinty tanteraka XiongYe
• Ny masinina dia ampifangarin'ny vy mombamomba avo lenta miaraka amin'ny fitsaboana fanamainana taona izay afaka mitondra tanjaka ambony, tsy fanovana endrika ary fanoherana avo lenta ny hery mivelatra avy amin'ny vokatra avo lenta.
• Ny masinina dia fehezin'ny fampiratiana efijery feno solosaina feno PLC izay afaka mahatsapa ny fizotran'ny fihodinana mandeha ho azy, ny famaranana ny bobongolo, ny famahanana ara-nofo, ny fanafanana, ny fitehirizana ny hafanana, ny fihenan-tsofina, ny demoulding ary ny fivoahana ireo vokatra vita.
• Ny tontolon'ny bobongolo dia vita amin'ny takelaka alimina alimika manokana izay afaka mahatsapa fahombiazan'ny fitarihana hafanana, tanjaka azo antoka ary fiainana maharitra.
• Ny masinina dia ampifandraisina amin'ny fitaovana fantsom-panafody mihodina avo lenta miaraka amina fidirana mahery, adim-pitia mahasoa, fanjifana setroka kely, haingam-pandeha mamolavola ary votoatin'ny rano ambany mba hiantohana ny fitoviana ao anaty sy ivelan'ny plastika matevina. tontonana, izay tena nampitombo ny fahombiazan'ny famokarana.
· Nohosoran'ny vy avo lenta miaraka amin'ny fitsaboana maharitra.
· Fehezin'ny PLC miaraka amin'ny fisehoana efijery mikasika ny solosaina.
· Tontonana alimina alimika manokana izay afaka mahatsapa fahombiazan'ny fitarihana hafanana, tanjaka azo antoka ary fiainana maharitra.
· Ampifandraisina amin'ireo teknika fanatsarana sy fanamainana manokana any ivelany mba hamolavola.
· Ampifandraisina amina fitaovana fanamainana fantsom-panafody haingam-pandeha miaraka amina fidirana mahery, fametahana tsara, fihenan'ny setroka kely, haingam-pandeha mamolavola ary fihenan'ny rano ambany mba hiantohana ny fitoviana ao anaty sy ivelan'ny tontolon'ny plastika matevina, izay fitomboan'ny fahombiazan'ny famokarana.
· Rafitra fanamafisana ny rivotra
zavatra Unit \_ Model PSB-Q200 PSB-Q300 PSB-Q600 PSB-Q800
Net anatiny haben'ny ny bobongolo Chambre MG 2040x1020x530 3060x1250x630 6100x1240x630 8120x1240x630
Volan'ny efitrano bobongolo m³ 1,10 2,41 4,77 6,34
Vokatry ny vokatra / lanja manokana Kg / m³ 4.5-30 4.5-30 4.5-30 4.5-30
Fahombiazan'ny famokarana (Condition mahazatra) Tapa / h 4-8 4-9 4-9 6-9
Fanerena etona Mpa 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
Valin'ny diamondra miditra amin'ny rivotra MG 65 65 65 65
Savaivony fidirana etona MG 100 1000 150 150
Herin'aratra V 380 380 380 380
fahefana KW 7 9.5 15 15
Max. Lafiny ivelany MG 3600x2000x2750 4500x2150x2950 7500x2150x2950 9500x2150x2950
Ny lanja napetraka kg 3000 4500 9500 10500
Ny EPS Block dia ampiasaina amin'ny famokarana tontonana EPS, Sandwich Panel, ary notapahan'ny masinina fanapahana cnc ho an'ny endrika samihafa vokarin'ny EPS.
Previous: Masinina miova endrika PSZ Series
Manaraka: PSF I dia manoratra Pre-expander mitohy mandeha ho azy